Ndifuna ukuqala ibhlog yeemephu, ndingayibhalela bani? -Geofumadas
Ikhaya/Internet kunye neBlogs/Ndifuna ukubeka ibhulogi yeemifanekiso, obani ukubhala?
Internet kunye neBlogsegeomates My
Xa uqala iblogi, kukho imibuzo emininzi kwi desktop, ngokukodwa ukuze ungaphumeleli; Omnye wabo makabhalelwe yena.
Zikhona izikhundla ezahlukileyo, ezi zilandelayo:
1. Bhala ubhalele obaqhelileyo.
Oku kuyasebenza kwabo bafuna ukubeka ibhlog yakho, apho banokuthi babalise iziqendu zobomi babo, izifundo okanye uhambo. Olona tshintsho lukhulu kukuba utyelelo luya kuhlala lumbalwa ngaphandle kokuba ufezekisile udumo oluthile (nokuba kungenxa yokuba ibhlog yakho ifikelela kwiminyaka emininzi, uba ngumdlali weemovie okanye usungula ezopolitiko :))
2. Bhala iinjini zokukhangela.
Eli licebo elisetyenziswa ngokubanzi ngabo bafuna kuphela ukwenza imali kwiibhloko zabo, kodwa umxholo wabo uthambekele ekujikelezeni kuphela kwimiba okwangoku. Abenzi umxholo wabo, endaweni yoko bakhuphela amanye amabhlog okanye banxibelelane nesiqingatha sehlabathi ngaphandle kokuba nantoni na eyeyabo. Eyona ngxaki inkulu, abaphumeleli abafundi abathembekileyo kungekudala bangena kwiindlela ezisohlwaywa nguGoogle.
3. Bhala icandelo lesihloko.
Esi sisicwangciso esisekwe kukhangelo lwento encinci exhaphakileyo kodwa enokubakho, okanye nokuba iyaxhatshazwa, inemixholo eyaneleyo apho. Ukufezekisa oku, kuyimfuneko ngokubanzi ukwazi ubalo lwabasebenzisi be-Intanethi, abasebenzisi bezixhobo zekhompyuter kwesi sihloko, usetyenziso lwewebhu olujolise kwelo candelo kunye nezinto ezinika umbono wokuba singakhula kangakanani ukuba abafundi banokufumaneka.
Izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha icandelo
ULwimi. Nangona ulwimi lwesiNgesi lolona hlobo lubalaseleyo lokubhala, ngenxa yenani labasebenzisi abanokufikelelwa kwihlabathi liphela, ukhuphiswano lunzima kwaye lucacile ... kuya kufuneka usazi isiNgesi. ISpanish iseyenye indlela esebenzayo, ithathwa njengelona lwimi luthethwano lwesibini kuGoogle.
Abasebenzisi womxholo. Bambalwa abantu abanobuganga bokwenza ibhlog apho bafuna ukuthetha ngenkqubo yokusombulula
Blogs e khu phiswano. Ukuba isihloko sizele ziiblogi, ngobudala kuya kuba yimfuneko ukucinga malunga nokunikezela ngento eyahlukileyo okanye ngekhe kukhule.
Ikhono lokufunda esi sifundo. Akunakwenzeka ukuba ube neblogi kwisihloko ongenakho ukulawula ngokupheleleyo, ngokukhawuleza okanye kamva abafundi baya kukubamba. Ke ukuba isifundo sibanzi, kungcono ukuba yingcali kwi-AutoCAD kunokungena kwizifundo zemodeli yendawo ongakwaziyo ukuyazi kakuhle.
Ukukwazi ukuhlangabezana nemfuno. Ukuba ibhlog yakho ifumana indawo, uya kuba nabafundi abaya kwenza amagqabantshintshi yonke imihla kwaye baya kubona iimpendulo zakho. Into emayithethwe malunga nokuba baya kulindela kangaphi ukubona uhlaziyo, ke mangaphi abafundi ofuna ukuba nawo alingane ngokuthe ngqo nokuba uchithe ixesha elingakanani ubhala kwaye uhlala nabo bakutyelelayo.